Lira yeTurkey inopwanya kune nyowani-yenguva-yakaderera ichipesana nedhora reUS
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Turkey Kuputsa Nhau » Lira yeTurkey inopwanya kune nyowani-yenguva-yakaderera ichipesana nedhora reUS
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • Investments • nhau • vanhu • Kutarisirwa • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Turkey Kuputsa Nhau
Lira yeTurkey inopwanya kune nyowani-yenguva-yakaderera ichipesana nedhora reUS.
Mukupedzisira, sarudzo pamutemo wezvemari weTurkey hadzichatorwa nebhangi repakati pacharo asi dzinotorwa muMuzinda waMutungamiri.
Lira yeTurkey yadurura makumi maviri muzana gore rino uye hafu yekudzikira kwauya kubva kutanga kwemwedzi wapfuura.
Akanyanyisa kuita mumisika irikubuda gore rino, mari yeTurkey yakabata yakaderera ye9.3350 kurwisa dhora nhasi.
Societe Generale akafanotaura kutemwa kwemapoinzi zana kuchiteverwa nekumbomiswa nebhangi repakati apo lira inotsvedza kusvika pa100 maringe nedhora pakupera kwegore.
Muiti akaipisisa mumisika irikubuda gore rino, lira yeTurkey yanyura kune yakatsva-nguva yese yakanangana nedhora reUS nhasi.
Mari yeTurkey yakabata yakaderera ye9.3350 ichipesana nedhora risati ratara kumwe kurasikirwa. Yakamira pa9.31 na18: 22 GMT.
Vaongorori vezvemari vanoona kushoma pamberi pemari yenyika yeTurkey, zvichipiwa izvo zvinonzi kutarisira kwehuwandu hwemubereko husina musoro.
Lira yeTurkey yadurura makumi maviri muzana gore rino uye hafu yekudzikira kwauya kubva kutanga kwemwedzi wapfuura, apo iyo Central Bank yeTurkey akatanga kupa zviratidzo zvekushamisira kunyangwe inflation ichikwira kusvika padyo ne20 muzana.
Turkey Mutungamiri Recep Tayyip Erdogan yakagara ichidaidzira kudzikiswa kwemari uye simba rake, kusanganisira nekukurumidza kutsiva hutungamiriri hwepamusoro bhangi, zvinoonekwa kunge zvakanganisa kuvimbika kwemitemo mumakore apfuura.
Mushure mekuvhunduka kwemwedzi wapfuura zana-poindi yakatemwa yakatumira iyo lira kuwira, vezvehupfumi vakaferefetwa neReuters venhau venhau vakapatsanurwa pamusoro pekuti bhanga repakati raizoreruka nemamwe makumi mashanu kana zana hwaro hwenongedzo pamusangano wedare weChina.
Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzakaramba kupindura sarudzo dzikapihwa fungidziro yekuti bhanga guru renyika raive risingafungidzike, kunyanya mushure mekunge Erdogan adzinga nhengo dzayo nhatu dzemari (MPC) nhengo svondo rapfuura, kusanganisira vaviri vakaonekwa vachipesana nemitero.
"Pakupedzisira sarudzo dze… mutemo wezvemari hauchatorwa nebhanga guru pacharo asi rinotorwa muMuzinda waMutungamiri," vakadaro vaongorori veCommerzbank.
Mushure mekupedzisira kubhengi kwepakati kubvunda-up, Erdogan "Akabvisa zvine musoro kupokana kwese nemaonero ake echokwadi kuti huwandu hwezvikwereti hunokonzera kukwira kwemitengo", vaongorori veSocGen vakanyora mutsamba yemutengi.
Kunyangwe "kusanzwisisika" kwekuwedzera kwemitero ikozvino, "hapasisina chikonzero chekutsigira nharo dzechinyakare dzehupfumi mukufunga nezve [bhanga repakati] maitiro angangoita," vakanyora.